သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ဒီမိုးကို မိုးဟု…
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:59 PM
စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ ပဲ မျှားယူနိုင်လိမ့်မယ်.
ဲဒီကိစ္စက သိပ်နုညံ့လွန်းတယ် ..
သိပ်ဟုတ်တာပေ့ါ...ဒီကာလမှာ ကောင်းကင်ကရွာကျ လာတိုင်း မိုးလို့သတ်မှတ်ရမှာ ခပ်ခက်ခက်ပဲ၊ အက်ဆစ် မိုးတွေ၊ အမြောက်နဲ့ ဖေါက်ယူတဲ့မိုးတွေ၊ ဗုံးနဲ့ ခွဲချတဲ့ မိုးတွေ၊ လိုတဲ့အချိန်မှာ ခလုတ်နှိပ်ပြီး ရွာစေတဲ့ မိုးတွေ.. ဒီမိုးတွေ ကြားမှာ ဘယ်မိုးဟာ တကယ်ရွာတယ်လို့ ပြောနိုင် ပါ့မလဲ? တကယ်ရွာ, မရွာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သေချာတဲ့ မိုးကတော့ ရင်ထဲမှာရွာတတ်တဲ့ မိုးပါပဲ၊ နေပူ ကျဲကျဲအောက်မှာတောင် နင့်နေအောင် ရွှဲစေတတ်တဲ့ မိုးရယ်ပါ။
မြူခိုးတွေ အိပ်မောကျတဲ့ ခဏ
( အာဇာနည်မိုး နဲ့ အာဘွားဘလော့ဂ်)